Nhau - Hupenyu Hunodziya Kunze Kwekunze Nenzvimbo dzekunze
Hupenyu Hunodziya Kunze Kunze Nenzvimbo dzekunze
Bindu nebhokisi zvinogona kugadzira hupenyu hwakakwana hwenzvimbo yekunze.
tinogara tiine hurongwa hwekuti: Ndichadyara mbeu dzakasiyana kana ndine gadheni, ndichichengeta Chitubu imomo nechiedza chezuva nemaruva. Kana, kana ini ndiine mashoma mativi yeyadhi, ndinoda kuve mushongedzi nemusuwo wechipenga, kugara pamberi pehwindo nemawindo echivezwa. Kana ini ndiine mhanza yekunze, ndichifarira nzvimbo yekunze nemhuri uye shamwari svetukira mupfungwa dzangu nekukasira.
Kana isu tine balcony ine furati uye mukati meimba, nzira yakanakisa ndeyekuishandisa nayo nemidziyo yekunze uye nzvimbo dzehunhu. Nekusimudzira kwakanyanya kwenzanga, vanhu vanogona kunzwa kunetseka kubva kubasa. Mushure memaawa masere ekushanda nguva, imba yedu inotapira ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuzorora. Dziva rekushambira, mashoma mashoma tresses ane anowedzera girini ese anotinzwa isu nesimba uye nesimba.
Iyo yakanaka yekunze fanicha dhizaini inoumbwa neinotevera maficha: zvinhu, kuvaka, tekinoroji, uye maitiro. Sun Master inopfuura yekunze yekugadzira kwemakore makumi maviri asiwo dhizaini inokurudzirwa fekitori ine makumi matatu mamodheru emhando dzese mwaka.
Iyi rattan poolside recliner inoita kuti iwe ugare uchinakidzwa nekutenga kwako kana zvasvika mumaziso ako, chero iko iko. Chimbofungidzira, iwe wakarara pamubhedha werattan, miti nemaruva zvakatenderedza, kupenya kwezuva uye mhepo yakachena izere nezvakatenderedza. Sun Master ane hanya nemhando yezvidimbu zvedu. Zvigaro zvedu zvekunze nemalounges zvinopfuura kunakidza, kusimba nekuyevedza dhizaini mune zvese, asi zvakare kuratidza chiitiko chese tichishandisa rattan yedu yekunze fenicha.
Heano mamwe ruzivo rweyedu rattan weave yekunze recliner:
Iyo inodzoserwa backrest inopa zvishanu nzvimbo dzekushandisa.
Iwo maficha akapfava khushi akakodzera musoro wako. Inobviswa, inogona kuwachwa nemabutiro maviri.
Mativi nenzvimbo dzakatsenhama dzakapokana nezuva mune yakanaka mhando polyester rattan weave.
Iyo aluminium base yakadzikama yakasimba.
Kurumidza kuungana ne DIY ine lightweight kuvaka.